New State -
ထပ်ဆင့် အကယ်ဒမီများရှင် လပ်တီးရဲ့ ဒွမ်ဒီးဒီးဒွမ်တဲ့ ဒွမ်နှုန်းကို ပြောပြလာတဲ့ ပန်ဆယ်လို စဉ့်ကူးက ရွှေပြည်ရဲစခန်းကို PDF တွေဝင်ပစ်၊ရဲ၅ ကောင်ဒွမ်။ စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကားက မိုင်းရှင်း….မိုင်းရှင်းရင်း မိုင်းကွဲ၃ကောင် ထပ်ဒွမ််။ ထပ်မံမိုင်းရှင်း ထပ်မံမိုင်းကွဲ ၃ကောင် ထပ်ဒွမ်။ အလောင်းလာကောက်တဲ့ စစ်ကြောင်း ထပ်မိုင်းမိ ၁၂ ကောင်ဒွမ်။ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီများရှင် လပ်တီးနော် ကျော်ဟိန်းရယ်၊ ရန်အောင်ရယ်၊ ချိုပြုံးရယ် ပေါင်းထားသလိုပဲ။ ဒွမ်ဒီးဒီးဒွမ် ထပ္ဆင့္ အကယ္ဒမီမ်ားရွင္ လပ္တီးရဲ႕ ဒြမ္ဒီးဒီးဒြမ္တဲ့ ဒြမ္ႏႈန္းကို ေျပာျပလာတဲ့ ပန္ဆယ္လို စဥ့္ကူးက ေ႐ႊျပည္ရဲစခန္းကို PDF ေတြဝင္ပစ္၊ရဲ၅ ေကာင္ဒြမ္။ စစ္ကူလာတဲ့စစ္ကားက မိုင္းရွင္း….မိုင္းရွင္းရင္း မိုင္းကြဲ၃ေကာင္ ထပ္ဒြမ္္။ ထပ္မံမိုင္းရွင္း ထပ္မံမိုင္းကြဲ ၃ေကာင္ ထပ္ဒြမ္။ အေလာင္းလာေကာက္တဲ့ စစ္ေၾကာင္း ထပ္မိုင္းမိ […]
လူမျိုးတုံးသ တ်ဖြ တ်မှု ထပ်ကျူးလွ န်ဖို့ လူမိုက်စကား ပြောနေတာလို့ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းစကားကို AA
လူမျိုးတုံးသ တ်ဖြ တ်မှု ထပ်ကျူးလွ န်ဖို့ လူမိုက်စကား ပြောနေတာလို့ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းစကားကို AA ရခိုင်မှာ ပြဿနာဖြစ်လာပါက တပ်မတော်ကို အဆိုးမဆိုပါနဲ့ဆိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းရဲ့ ဒီကနေ့ ပြောဆိုချက်အပေါ် AA က တုန့်ပြန် လာပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ AA တပ်မတော်ဘက်ကို RFA သတင်းဌာနရဲ့ မေးမြန်းချက်အပေါ် အခုလို ဦးခိုင်သုခက ဖြေကြားလိုက်တာပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စစ်တပ်က လူမျိုးတု န်းသ တ်ဖြ တ်မှု နောက်တစ်ခေါက်ကျူးလွန်ဖို့ လူမိုက်စကားပြောနေတာလို့ AA တပ်မတော်ရဲ့ ပြောခွင့်ရ ဦးခိုင်သုခက တုန့်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ AA နဲ့ NUG တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အပေါ် တပ်မတော်အနေနဲ့ ဒီအတိုင်းပဲကြည့်နေမှာလားဆိုတဲ့ သူရိယနေဝန်းမီဒီယာရဲ့ အယ်ဒီတာချုပ် မိုးဟိန်းရဲ့ မေးမြန်းမှုကနေတစ်ဆင့် တပ်မတော်သတင်းသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ရခိုင်ပြည်အပေါ်အခုလို […]
ကရင်မှာလည်း ပြေးတာ ထိုင်းထိရောက်ကုန်ပြီ၊ ရခိုင်ကို လှည့်ကြိမ်းနေသေးတယ် ဆိုတဲ့ ပန်ဆယ်လို စစ်ကိုင်းလည်း မထိန်းနိုင် ကရင်နီမှာလည်း ပြာခါနေတာ ကရင်မှာလည်း ပြေးတာ ထိုင်းထိရောက်ကုန်ပြီ ကချင်မှာဆို နားရွက်တောင် မလှုပ်ရဲဘူး။ ရခိုင်ကို လှည့်ကြိမ်းနေသေးတယ်။ ပြည်သူကို ငဲ့ညှာလို့ပေါ့ကွာဆိုပဲ အယ့်လယ်…. အင်တာနက်ဖြတ်ပြီး ရခိုင်ကို ဖိနှိပ်တုန်းက သူတို့ မဟုတ်တဲ့အတိုင်းနော်။ ဇော်မဲလုံးက လူအသံနဲ့သာ ပြောတာ ဝုတ်ဝုတ်စကားတွေချည်းပဲ။ 🤣 ကရင္မွာလည္း ေျပးတာ ထိုင္းထိေရာက္ကုန္ၿပီ၊ ရခိုင္ကို လွည့္ႀကိမ္းေနေသးတယ္ ဆိုတဲ့ ပန္ဆယ္လို စစ္ကိုင္းလည္း မထိန္းနိုင္ ကရင္နီမွာလည္း ျပာခါေနတာ ကရင္မွာလည္း ေျပးတာ ထိုင္းထိေရာက္ကုန္ၿပီ ကခ်င္မွာဆို နား႐ြက္ေတာင္ မလႈပ္ရဲဘူး။ ရခိုင္ကို လွည့္ႀကိမ္းေနေသးတယ္။ ျပည္သူကို ငဲ့ညွာလို႔ေပါ့ကြာဆိုပဲ အယ့္လယ္. အင္တာနက္ျဖတ္ၿပီး […]
ညဘက် တက္ကစီ နဲ့ အပြင်သွားတတ်တဲ့ သူတွေ အထူးသတိထားသင့် နေပါပြီ မနေ့က မိုးကောင်း ကနေ တဥကလာကို အသွား မီး ည်းပြတ် လမ်းအမှောင် တနေရာမှာ ကားရပ်သွားပီး လူလေးယောက်အဖွဲ့လိုက်တက်လာကာ ဖုန်းကောဝတ်ထားတဲ့ရွှေတွေကောပါလာသမျှ ရိုက်လုခံလိုက်ရပါတယ် တပ် အယောင်ဆောင်ပီး အဖွဲ့နဲ့လုပ်စားနေကြတာပါစစချင်း taxi က သူတို့မှောင်ရိပ်ခိုတဲ့နေရာမှာ ရပ်ပါတယ် ပြီးရင် ကားတံခါးပတ်လည်မှာ ပိတ်ရပ်ပီး တပ်ကသတင်းရလို့ စစ်ဆေးစရာရှိလို့ဆိုပီး ကားပေါ်အတင်းတက်ပါတယ် ကျနော် ကားတံခါးကိုခြေထောက်နဲ့ ဆောင့်ကန်ထွက်ပေးမယ်လုပ်လို့ ထိုးကြိတ်ပီး ကားပေါ်တက်ပီး ဘေးကနှစ်ယောက်က လက်ကိုချုပ်ပီး ကားအနောက်ဆုံးခန်းကနေ နောက်တစ်ယောက်က လည်ပင်းကနေချုပ်ပါတယ် သူတို့ကို လူလိမ်လို့ပြောလို့လည်းပါးတွေရိုက်ခံရပါတယ် လမ်းတလျှောက် ဖုန်းတွေpw ဖွင့်ခိုင်း ပိုက်ဆံတွေထုတ်ခိုင်း လက်စွပ်တွေ ချွတ်ခိုင်းပီးအကုန်သိမ်းပါတယ် လက်စွပ်ကို သူတို့မသိအောင် ချွတ်ပီးဘောင်းဘီဒူးပြဲထဲ ထည့်မိလို့ […]
အကိုပြောတော့အောင်ပွဲရတဲ့အချိန်ထိရှိနေမှာဆို အခုတော့ဗျာ😔ထွက်သွားတာစောလွန်းတယ် (ရုပ်သံ) အကိုပြောတော့အောင်ပွဲရတဲ့အချိန်ထိရှိနေမှာဆို အခုတော့ဗျာ😔ထွက်သွားတာစောလွန်းတယ် (ရုပ်သံ) အကိုပြောတော့အောင်ပွဲရတဲ့အချိန်ထိရှိနေမှာဆို အခုတော့ဗျာ😔ထွက်သွားတာစောလွန်းတယ် (ရုပ်သံ) အကိုပြောတော့အောင်ပွဲရတဲ့အချိန်ထိရှိနေမှာဆို အခုတော့ဗျာ😔ထွက်သွားတာစောလွန်းတယ် (ရုပ်သံ) အကိုပြောတော့အောင်ပွဲရတဲ့အချိန်ထိရှိနေမှာဆို အခုတော့ဗျာ😔ထွက်သွားတာစောလွန်းတယ် (ရုပ်သံ) အကိုပြောတော့အောင်ပွဲရတဲ့အချိန်ထိရှိနေမှာဆို အခုတော့ဗျာ😔ထွက်သွားတာစောလွန်းတယ် (ရုပ်သံ) အကိုပြောတော့အောင်ပွဲရတဲ့အချိန်ထိရှိနေမှာဆို အခုတော့ဗျာ😔ထွက်သွားတာစောလွန်းတယ် (ရုပ်သံ) အကိုပြောတော့အောင်ပွဲရတဲ့အချိန်ထိရှိနေမှာဆို အခုတော့ဗျာ😔ထွက်သွားတာစောလွန်းတယ် (ရုပ်သံ) အကိုပြောတော့အောင်ပွဲရတဲ့အချိန်ထိရှိနေမှာဆို အခုတော့ဗျာ😔ထွက်သွားတာစောလွန်းတယ် (ရုပ်သံ)
(မုန်တိုင်းသတိပေးချက်) အနီရောင်အဆင့် သတ်မှတ်ထားသည့် မုန်တိုင်းငယ် မော်လမြိုင်မြို့အနီးမှ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည် DVB မုန်တိုင်းငယ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ၊ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့အနီးမှ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မယ့် အခြေအနေဖြစ်လို့ အနီရောင်အဆင့်ဟု သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ မိုးဇလဌာနက မုန်တိုင်းငယ် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၂:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်း(မုတ္တမကမ်းလွန်အနီး)တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အား ကောင်းသောလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း (Well Marked Low Pressure Area) သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး၊ မုန်တိုင်းငယ်(Depression)အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိ ခဲ့ကာ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ဘီလူးကျွန်းမြို့(Bilu Island)၏ အနောက် တောင်ဘက် ရေမိုင်(၁၅)မိုင်ခန့်၊ မော်လမြိုင်မြို့(Mawlamyaine)၏ အနောက် တောင်ဘက် ရေမိုင်(၂၅)မိုင်ခန့်၊ ပေါင်မြို့(Paung)၏ ‌တောင်-အနောက် တောင်ဘက် ရေမိုင်(၂၅)မိုင်ခန့်၊ သထုံမြို့(Thaton)၏ တောင်-အနောက် တောင်ဘက် ရေမိုင်(၄၅)မိုင်ခန့်၊ […]
မ​လေးရှား နိုင်ငံခြား​ရေးဝန်ကြီးကို မျောက်ပြ ကမ္ဘာလှည့်ရောင်းလို့ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ​ပြောကြား
မ​လေးရှား နိုင်ငံခြား​ရေးဝန်ကြီးကို မျောက်ပြ ကမ္ဘာလှည့်ရောင်းလို့ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ​ပြောကြား မလေးရှားနိုင်ငံခြား​ရေးဝန်ကြီးနှင့် NUG ကိုယ်စား လှယ်များ ​တွေ့ဆုံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအ​နေဖြင့်လည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် တုံ့ပြန်ထား​ကြောင်းနှင့် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ​ရှေးရှုပြီး​ နိုင်ငံခြား​ရေးမူဝါဒနှင့်အညီ လိုအပ်သည် ​ဆောင်ရွက်မှု​များ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်​ကြောင်းလည်း ဗိုလ်ချုပ်​ဇော်မင်းထွန်းက ​ပြောကြားသည်။ ဗိုလ်ချုပ်​ဇော်မင်းထွန်းက“မြန်မာနိုင်ငံအ​နေနဲ့ ပြင်းထန် စွာ ကန့်ကွက်တဲ့အ​ကြောင်းနဲ့ မ​လေးရှားအစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ၊ လွှတ်​တော်အမတ်များအ​နေနဲ့ ​နောင်မှာ အလားတူ ထိ​တွေ့ဆက်ဆံမှုမျိုး မပြုလုပ်ရန် သတိပေးထား​ကြောင်း မ​လေးရှားနိုင်ငံခြား​ရေးဝန်ကြီးဌာနကို ကန့်ကွက်စာ​ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်” ဟု ​​​ပြောကြားသည်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ မ​လေးရှားသံရုံးမှ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံကိုလည်း နိုင်ငံခြား​ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ​ခေါ်၍ ကန့်ကွက်ပြောဆိုခဲ့​ကြောင်းနှင့် ​ အထက်ပါတွေ့ဆုံ​ဆွေး​နွေးမှုတွင် မ​လေးရှားနိုင်ငံခြား​ရေးဝန်ကြီး၏ ​တောင်းဆိုမှုများကိုလည်း အားလုံးသိရှိကြမည်ဖြစ်​ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်​ဇော်မင်းထွန်းက ​ပြောကြားသည်။ “မ​လေးရှား နိုင်ငံခြား​ရေးဝန်ကြီးဆိုတဲ့လူက ​တွေ့တဲ့အခါမှာ […]
ဒေါက်ဖိနပ်‌လျှောက်သံ ကြားရတော့မည်…မတိုက်ပဲ နိုင်မည့်အောင်ပွဲ ဖြစ်တော့မည်…see more
ဒေါက်ဖိနပ်‌လျှောက်သံ ကြားရတော့မည်...မတိုက်ပဲ နိုင်မည့်အောင်ပွဲ ဖြစ်တော့မည်...see more
ဒေါက်ဖိနပ်‌လျှောက်သံ ကြားရတော့မည်…မတိုက်ပဲ နိုင်မည့်အောင်ပွဲ ဖြစ်တော့မည်…see more သိထားရုံလောက်ပဲ လေ့လာဖတ်ပါ မှန်နိုင်လားဆို မှန်နိုင်တဲ့ အချက်တွေချည်းပဲ အကြောင်းက စစ်ဆ်ိုင်ထားပြီး နပတကို ကား၅၀ကျော် ပြန်သွား (ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲ လုံခြုံရေးအတွက် ဖြစ်နိုင်) အခြားနေရာ‌တွေ တပ်ဖြန့်ထားပေမယ့် NUG ရဲ့ နိုင်ငံရေး ကစားမှု အာဆန် မလေး ပါ၀င်လာမှု US ဖိအားပေးမှုတွေက မအလအတွက် အိမ်မက်ဆိုးတွေ ဖြစ်စေပြီး စစ်ရေးနဲ့ဆိုလည်း မနိုင်လောက်သည့်အပြင် အတွင်းသတင်းအရ ပြောင်းပါလှည့်မည့်သူများရှိ၍ အခက်ဖြစ်နေပြီး နိုင်ငံရေး စစ်ရေးအရ အဖက်ဖက်မှာ ရှုံးနေချိန် ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ ထွက်ပေါက်အတွက် ဝေဝါးနေ၍ ဟန်ပဲရှိပြီး အမိန့်ကြောက်သော စစ်ဝါဒီလူတစ်စုမှလွဲ စစ်ရေးကို မတိုက်ချင်တော့သော သူ့ခေါင်းပေါ်ပဲ လက်ညိုးဝိုင်းထိုးပုံကျလာနေပြီဖြစ်သော မအလအတွက် ဘာလုပ်လုပ် ရှုံးနေ၍ […]
ဘုံသဘောတူညီမှု ၅ ချက်ကို မလိုက်နာတဲ့အတွက် စစ်ကောင်စီကို ဆက်ဆံမှုမပြုလုပ်တော့ကြောင်း US ကြေညာ
ဘုံသဘောတူညီမှု ၅ ချက်ကို မလိုက်နာတဲ့အတွက် စစ်ကောင်စီကို ဆက်ဆံမှုမပြုလုပ်တော့ကြောင်း US ကြေညာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး သောမတ်ဗိုက်ဒါနဲ့ အမေရိကန်-အာဆီယံပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဂျေဆင်ဆေးမောတို့က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မကြာသေးခင်က ဝါရှင်တန်မှာ ကျင်းပပြီးဆီးသွားတဲ့ အမေရိကန်-အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအကြောင်း ဆွေးနွေးပြောဆိုထားတာကို ရန်ကုန်က အမေရိကန်သံရုံးရဲ့ ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ မနေ့က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဘုံသေဘာတူညီမႈ ၅ ခ်က္ကို မလိုက္နာတဲ့အတြက္ စစ္ေကာင္စီကို ဆက္ဆံမႈမျပဳလုပ္ေတာ့ေၾကာင္း US ေၾကညာ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ေသာမတ္ဗိုက္ဒါနဲ႕ အေမရိကန္-အာဆီယံေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂၢိုလ္ ေဂ်ဆင္ေဆးေမာတို႔က ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႕ မၾကာေသးခင္က ဝါရွင္တန္မွာ က်င္းပၿပီးဆီးသြားတဲ့ အေမရိကန္-အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးအေၾကာင္း ေဆြးႏြေးေျပာဆိုထားတာကို ရန္ကုန္က အေမရိကန္သံ႐ုံးရဲ႕ ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ မေန႕က ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
အပြောတမျိုးအလုပ်တမျိုးလုပ်တဲ့ စစ်တပ်နဲ့ လက်ရှိမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့မ…see more အပြောတမျိုးအလုပ်တမျိုးလုပ်တဲ့ စစ်တပ်နဲ့ လက်ရှိမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့မရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ အနေအထားကိုကြည့်ပြီး လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို တုံ့ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် အေအေ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခိုင်သုခက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။ အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်က တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကို ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဖိတ်ခေါ်နေပေမယ့် သူရဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စစ်အင်အားတိုးချဲ့ပြီး အေအေအဖွဲ့ကို အချိန်မရွေးတိုက်ခိုက်နိုင်အောင်ပြင်ဆင်နေတာကြောင့် အပြောနဲ့အလုပ်မညီတဲ့အတွက် စစ်တပ်နဲ့ အေအေကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးက ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ခိုင်သုခက ပြောပါတယ် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရချင်တယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးရနိုင်တဲ့ အပြောအဆို အပြုအမူတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပြီး ပြည်သူတွေကို အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က ဖိနှိပ်နေတာတွေကို မရပ်တန့်ဘူးဆိုရင်လည်း ဘယ်လိုမှ ပြေလည်လာနိုင်ဖို့မရှိဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ရက္ခိုင့်တပ်တော် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခိုင်သုခ “လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို […]